ekhaya / Bible / YeVangeli kaMateyu / ch 10 Matthew
10:1 Ke kaloku, ebabizele ndawonye abafundi bakhe abalishumi elinababini, wabanika igunya koomoya abangcolileyo, ukuze babakhuphe nokuphilisa izifo zonke nezikhuhlane zonke lobulwelwe.
10:2 Ngoku ke amagama Apostles elinambini ezi: eyokuqala, sean, lowo ubizwa ngokuba nguPetros, noAndreya, umzalwana wakhe,
10:3 James kaZebhedi, noYohane umzalwana wakhe,, UFilipu noBhartolomeyu, UThomas UMateyu umqokeleli werhafu, noYakobi ka-Alifeyu, ogama limbi linguTadeyu,
10:4 USimon umKanan, noYuda Sikariyoti, lowo wamngcatshayo.
10:5 UYesu wathumela la elinambini, ebayalela, bathi: "Musa ukuhamba ngendlela yeentlanga, yaye musa ukungena emzini wamaSamariya,
10:6 kodwa endaweni yoko yiyani ke kanye kwizimvu abaye kude kwindlu kaSirayeli.
10:7 Bephumile, bashumayele, bathi: 'Kuba ubukumkani bamazulu busondele.'
10:8 Aphilise nabagulayo, ukuvusa abafileyo, hlambululani abaneqhenqa, ndizikhupha iidemon. Uye wafumana ngokukhululekileyo, yiphani ngesisa.
10:9 Musa ukukhetha ilifa igolide, yesiliva, namali emibhinqweni yenu,
10:10 okanye nomphako wendlela, nangubo zangaphantsi ngambini, nazimbadada, namsimelelo. Kuba umsebenzi ufanelwe isabelo sakhe.
10:11 ngoku, zibe Emzini ke enisukuba okanye idolophu wena uya kungena, nibuzise ukuba ngubani na ofanele ngaphakathi kuyo. Nihlale ke khona apho nide nimke.
10:12 ke, xa kungena endlwini, sibingelela it, bathi, 'Uxolo malube kule ndlu.'
10:13 kwaye ukuba, kanjalo, andikulingene ukuba indlu, uxolo lwenu lohlala phezu kwawo. Kodwa ukuba ayifanelekile, uxolo lwenu baya kubuyela kuwe.
10:14 Kwaye nabani na lo andizamkelanga kuwe, okanye ndaweva amazwi akho, lemka kuloo ndlu okanye isixeko, vuthululani uthuli ezinyaweni zenu.
10:15 Inene, ndithi kuni, Kuya kuba nokunyamezeleka okomhlaba waseSodom nokweGomora ngomhla womgwebo, kunokwaloo mzi.
10:16 Khangela, Mna ndinithuma njengezimvu phakathi kweengcuka. ngoko ke, kuba nobulumko njengeenyoka kwaye elula njengamahobe ukungabi.
10:17 Balumkeleni ke abantu. Kuba baya kuninikela ezintlanganisweni zamatyala, kwaye baya banityakatye ezindlwini zabo zesikhungu.
10:18 Kwaye uya kukhokelelwa phambi kwabalawuli bobabini kunye nookumkani ngenxa yam, kube bubungqina kubo, nakuzo iintlanga.
10:19 Kodwa xa kuninikela, musa ukukhetha ucinge ukuba bathethe ngayo okanye. Kuba komnceda ntoni na ndilithetha liya kunikwa ngelo lixa.
10:20 Kuba asinini abaya kuba uthetha, kodwa uMoya kaYihlo, oya kuthetha kuwe.
10:21 Ke kaloku, umzalwana uya kunikezela umzalwana ekufeni, kunye noyise baya unyana. Bathi nabantwana basuke phezu kwabazali kubekho ukufa kwabo.
10:22 Yaye niya kuthiywa ngabantu bonke ngenxa yegama lam. Ke othe aye azingisa, kude kube sekupheleni, lowo uya kusindiswa.
10:23 Ke kaloku, Xa sukuba ke benitshutshisa kuloo mzi enye, sabelani kuwumbi. Inene, ndithi kuni, akuyi kuba ndidiniwe ngalo lonke imizi yakwaSirayeli, phambi koNyana woMntu returns.
10:24 Akukho mfundi mkhulu kunomfundisi, yaye lo mkhonzi mkhulu kunenkosi yakhe.
10:25 Kuyinto Kumanele umfundi ukuba abe njengomfundisi wakhe, Ikhoboka, ukuba abe njengenkosi yakhe. Ukuba ngokuba uYise usapho, 'ngoBhelezebhule,'Wobeka phi na abo bendlu yakhe?
10:26 ngoko ke, musa ukuboyika. Kuba akukho nto igutyungelweyo ingayi kutyhilwa, nefihlakeleyo ingayi kwaziwa.
10:27 Oko ndikutsho kuni ebumnyameni, thetha ekukhanyeni. Kwaye yintoni Akuziva endlebeni endlebeni, bashumayele phezu kwezindlu.
10:28 Kanjalo musani ukuboyika abo babulala umzimba, kodwa bengenako ukuwubulala wona umphefumlo. Kodwa endaweni yoyikani ke kanye lowo unako ukutshabalalisa umphefumlo kwanomzimba esihogweni.
10:29 Ngaba oongqatyana ababini wathengisa ukuba ingqekembe encinane? Kanti akukho namnye kubo oya kuwela emhlabeni ngaphandle koYihlo.
10:30 Kuba Kwaneenwele ezi zentloko yenu zibaliwe zonke abebalwa.
10:31 ngoko ke, Sukoyika. Wena ngakumbi na oongqatyana abaninzi.
10:32 ngoko ke, Wonke umntu othe wandivuma phambi kwabantu, nam ndiya kwenjenjalo ukubakhangelela phambi koBawo, osezulwini.
10:33 But whoever will have denied me before men, I also will deny before my Father, osezulwini.
10:34 Musa ukucinga ukuba ndize kungenisa luxolo phezu komhlaba. ndasuka, ukuba ukuthumela uxolo, kodwa ikrele.
10:35 Kuba ndize yahlula umntu noyise, intombi nonina, kunye umolokazana uvukelana uninazala-in-mthetho.
10:36 Yaye iintshaba zomntu ziya kuba ngabendlu yakhe.
10:37 Lowo uthanda uyise nokuba ngunina kunam, akandifanele mna. Kwaye nabani na uthanda unyana wakhe nokuba yintombi yakhe kunam, akandifanele mna.
10:38 Yaye nabani na awuthwale umnqamlezo wakhe, andilandele, akandifanele mna.
10:39 Lowo uwufumeneyo umphefumlo wakhe, uya kulahlekelwa nguwo. Kwaye nabani na oya kuba uwulahlileyo umphefumlo wakhe ngenxa yam, uya kuwufumana.
10:40 Lowo wamkela nina,, wamkela mna. Yaye nabani na owamkela mna, wamkela lowo wandithumayo.
10:41 Lowo wamkela umprofeti, egameni lomprofeti, uya kwamkela umvuzo womprofeti. Yaye nabani na owamkela nje egameni nje uya kwamkela umvuzo i nje.
10:42 Nosukuba kukunika, kuse koyena mncinane kula, indebe yodwa yamanzi abandayo okusela, kuphela egameni lomfundi: Inene, ndithi kuni, akasayi kuphulukana nomvuzo wakhe. "